खबर Archives - Purbeli News
English खबर	कलाकार प्रदीप सिंहको उपचारको क्रममा निधन !	काठमाडौँ। कलाकार प्रदिप सिंहको ५९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनको भारतको कलकत्ता मेडिकल एन्ड रिर्सच सेन्टरमा उपचारको क्रममा निधन भएको छ । कोसेली देखी चिनो ‘ दक्षिणा , दुई थोपा आँसु , दक्षिणा, मितज्यू, बलिदान, रहर लगायत दर्जनौं नेपाली चलचित्रहरुमा सिंह अभिनय गरेका थिए । नेपाली कला जगतले एक होनहार कलाकार गुमाउनु पर्दा नेपाली कला जगतमा ठुलो क्षति पुग...	संगीत साधना प्रतिष्ठान इटहरीलाई गीतकार पूजा मारियाको सहयोग	इटहरी । गीतकार पूजा मारियाले इटहरीमा रहेको संगीत साधना प्रतिष्ठानलाई आफ्ना पछिल्लो दुई एल्बम जीवन साथी र परदेशीको यादमा बिक्रीबाट आएको रु दश हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेकी छन् । पूर्वमा रहेर गीतसंगीतमा क्रियाशील रहँदै आएकी मारिया राजधानी र पूर्वलाई जोड्ने एक सफल गीतकारका रुपमा परिचित छिन् ।
केही समय पहिला सार्वजनिक भएको आधुनिक गीतिसंग्रह जीवन साथी ...	मिस नेपाल २०१७ को कलेज एक्टिभेशन धरान र इटहरीमा	धरान / हिडेन ट्रेजरको आयोजनामा हरेक बर्ष आयोजना हुँदै आएको मिस नेपालको नया संस्करणको लागि उत्क्र्सट प्रतियोगीहरु खोज्दै बिभिन्न सहरहरुमा अडिसन लिने क्रममा आउदो चैत्र २९ गते धरानको होटल नवयुगमा अडिसन राखिएको छ ।
अडिसन अघि आइतबार इटहरीको नमुना कलेज र कस्तुरी एकेडेमी र सोमबार धरानको धरान मोडल कलेज र धरान सिटी कलेजमा मिस नेपालको अफिसियल कोरियोग्र...	भूटानी शरणार्थीको जीवनमाथि ‘देश खोज्दै जाँदा’ (हेर्नुस् ट्रेलर)	काठमाडौं । भूटानी शरणार्थीहरुको कथामाथि निर्माण भएको फिल्म ‘देश खोज्दै जाँदा’को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । विहिबार राजधानीमा एक कार्यक्रमविच फिल्मको अफिसियल ट्रेलर र रिलिज मिती सार्वजनिक गरिएको हो । दुई मिनेट ६ सेकेण्डको ट्रेलरमा भुटानी शरणार्थीको आन्दोलन, दुःख, भावना र यथार्थलाई देख्न सकिन्छ । फिल्मको रिलिज मिती जेठ–१२ गतेलाई तय गरिएको छ ।
...	मिष्टर हिमालय राष्ट्रिय खुल्ला शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता तयारी पुरा	नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस संघले आयोजना गर्न लागेको छैठौं मिष्टर हिमालय राष्ट्रिय खुल्ला शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता एवं प्रथम पुरुष फिटनेस तथा महिला एथलेटिक्स फिजिक्स(२०७३ ) को तयारीको पुरा भएको छ | संघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै चैत्र २५ र २६ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदस्थित कभर्ड हलमा हुने प्रतियोगिताको अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिएको ह...	यस्तो छ राम चरणको ९० करोड भारू पर्ने घर	एजेन्सी। साउथ फिल्मका स्टार एवं सुपरस्टार चिरञ्जिबीका छोरा यसै सोबारबाट ३२ वर्षका भए। २७ मार्च, १९८५ मा चेन्नईमा जन्मिएका राम चर्णले सन् २००७ मा पुरी जगन्नाथको फिल्म 'चिरूथा'बाट फिल्ममा डेब्यू गरेका थिए। बलिउड फिल्म 'जंजिर'मा उनले सन् २०१३ मा डेब्यू गरे। फिल्ममा प्रियंका चोपडा उनको जोडी बनेकी थिइन्। फिल्म फल्प भएपछि उनी अर्को बलिउड फिल्ममा देखिएनन्...	रामकृष्ण ढकालको एकल साँझ हुने	चैत १३, काठमाडौं । रामकृष्ण ढकालको एकल साँझ आगामी चैत १८ गते राजधानीको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ । विन्ध्यवासिनी म्यूजिकको आयोजनामा हुन गइरहेको ‘रामकृष्ण ढकाल एकल साँझ २०७३’ ले सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुँदै आएको संस्था विन्ध्यवासिनी फाउन्डेसनको सहयोगार्थ प्रस्तुत हुने भएको छ ।
आज राजधानीको इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा पत...	धरानमा एसडब्लु फेसन शो हुदै	सुनसरी / लामो अन्तरालपछि धरानमा भव्य फेसन शो हुने भएको छ । भिन्टेज इभेन्टसको आयोजनामा फेसन पारखीहरुका लागि हुन लागेको हाे । भाेलि हुने भनिएकाे एसडब्लु फेसन परेडमा नायक तथा मोडल अनुविक्रम शाही र नायिका तथा मिस नेपाल २०११ की मलिना जोशी विशेष आकर्षकको रुपमा रहनेछन् ।
धरान १५ स्थित इजी राइडर्स होटलको प्राङ्गणमा भव्य स्टेज र उत्कृष्ट साउण्ड र ला...	संगितमा भविष्य खाेज्दै सुनसरीकि अाकृती : उनि भन्छिन जिवनमा संघर्ष गरेपछि सफलता अवस्य पाइन्छ !	सुनसरी । सांगितिक आकाशमा आफ्नो पहिचान खोज्दै हिडेकि आकृतीलाई कसैले स्थानिय कलाकार भनिदिदा आफुलाई संसारको सबै भन्दा खुशी व्याक्तिको रुपमा ठान्छिन। नेपाली गित संगितको बजार दिन प्रतिदिन धारासाहि बन्दै गएको अवस्थामा पनि नेपाली गित संगितलाई हामीले बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने सोच सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा घर भएकी आकृती पराजुलीको रहेको छ। गायन क्षेत्रलाई आफनो पे...	पोखरामा उत्तम बनेपालीको फेसन ट्रेन्ड्स हुदै	काठमाण्डाै । नेपालका चर्चित फेसन डीजाइनर उत्तम बनेपाली पाँच बर्षको लामो अन्तराल पछि आफ्नो डिजाईनहरु " फेसन ट्रेन्ड्स २०१७ पोखरा " मार्फत प्रस्तुत गर्दैछन ꘡धरानबाट आफ्नो फेसन यात्रा सुरुवात गरि देश - विदेशमा उत्तिकै चर्चित उत्तम बनेपालीले यसपाली आफु संगै आफ्नो फेसन इनस्ट्टीच्युट सेन्ट्रल फेसन हब का दुइ बिधार्थीहरु इशु मगर र अन्जना श्रेष्ठको डिजा...	१२३›»